Technorati na-eweghachi Ngwa Peeji ... na ụfọdụ Ngwaọrụ Cool! | Martech Zone
Technorati na-ewepụta Ngwaọrụ Page… na ụfọdụ Ngwaọrụ Jụụ!
Sunday, Eprel 1, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Dorion Carroll naanị dee m site na Teknụzụ and they've ‘retooled' their Blogger's Tools page with a soft launch of some new Technorati blogging tools. You guys know that I'm a Technorati nut!
Edere m Teknụzụ Nzọụkwụ Technorati for WordPress a few weeks ago. I used quite a few technologies to make writing the plugin a little easier (cURL, PHP5, SimpleXML, WP-Cache, etc.) so I've gotten some pushback that it doesn't work with many hosts.
Ndị na-agụ saịtị m nwere ike ịnweta Ọnwa iri na abụọ nke nnwere onwe nnabata! See ala m Banyere peeji nke maka ọnwa iri na abụọ n'efu na onye ọbịa m.
Gụọ nri m ma nweta ọnwa 12 nke Bochum Weebụ Na-adịghị
Apr 2, 2007 na 4: 16 AM
Ekele maka ịbanye n'ime 3000 kacha elu na Technorati:
Kpụrụ: 2,987 (njikọ 1,465 sitere na blọọgụ 732)
Kwesịrị nke ọma, enyi m nwanyị
Apr 2, 2007 na 11: 25 AM
Daalụ! Agaghị m eme ya ma e wezụga unu niile. Achọrọ m ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ, ihe mgbaru ọsọ m bụ 5,000 afọ a. Amaghị m na ka ị na-eto na nnabata, ọkwa gị na-eto ngwa ngwa ka ị na-arịgo. Echere m na ozugbo ị banyere n'elu 500 ọ ga-amalitelata ngwa ngwa.
Ka anyị nwee olileanya na anyị abụọ ga-achọpụta!
Apr 2, 2007 na 8: 51 PM
WoW .. n'okpuru 800 ugbu a ?? nke ahụ dị nzuzu !!!!
Apr 2, 2007 na 8: 52 PM
Ana m atụ anya! Nke ahụ bụ ọnụọgụ nke blọọgụ na-ejikọ na ya. Ọ bụ ihe Technorati na-akpọ 'ikike ha'.
Mee 5, 2007 na 1: 44 AM
Abịara m saịtị a n'ihi ngwa mgbakwunye Technorati gị ma nwee mmasị na nkwupụta ndị edepụtara. N'ihi ya, ekpebiri m ịdenye aha ma hụ ebe ọ na-aga. Daalụ ugbu a…
Mee 5, 2007 na 8: 30 AM
Dave, enwere m olileanya na ị ga-anọ gburugburu! Mee ka m mara ma onwere isiokwu ịchọrọ ka m dee.
Daalụ maka ime ka m mara na ị nọ ebe a! 🙂
Jun 24, 2007 na 6: 04 PM
Daalụ nke ukwuu maka ngwa mgbakwunye ahụ. Aga m etinye ya n'ọrụ otu n'ime ụbọchị ndị a.